European Steel Leaders Seek Scrutiny Of Chinese British Steel Rescue | Myanmar Business Today
HomeBusinessInternationalEuropean Steel Leaders Seek Scrutiny Of Chinese British Steel Rescue
European steel lobby Eurofer plans to raise concerns with the European Commission over Chinese group Jingye’s proposed rescue of British Steel, saying the deal may flout rules on fair competition.
The government has also lent British Steel around 120 million pounds to enable it to comply with the EU Emissions Trading System.($1 = 0.7815 pounds)
British Steel ကုမ္ပဏီအား ကြွေးမြီများ စိုက်ပေးလျက် ကူညီပေးမည့် တရုတ် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု Jingye က အစီအမံနှင့် ပတ်သက်၍ European Commissionကို စိုးရိမ်ကြောင်းတင်ပြသွားရန် Eurofer က စီစဥ်နေသည်။ အဆိုပါ သဘောတူညီချက်သည် စတီးလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွင်း တရားမျှတသော ယှဥ်ပြိုင်မှုကို ယိုယွင်းသွားစေနိုင်ကြောင်း အဆိုပါ အဖွဲ့က ဆိုသည်။
အဆိုပါ သဘောတူညီချက် အတည်ဖြစ်သွားပါက ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရှိ စတီးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို တရုတ်ကုမ္ပဏီများက ပထမဆုံးအကြိမ် အပိုင်သိမ်းလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိ British Steelကို ဝယ်ယူရန် ကနဦးသဘောတူညီချက် ရရျိထားပြီး လာမည့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ပေါင်ငွေ ၁ဒသမ၂ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဒသမ၅ ဘီလီယံ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Jingye က ကတိပြုထားသည်။
ယခုသဘောတူညီချက်ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံအား အဓိက ကုန်သွယ်ဖက်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ် ဆက်ဆံလိုနေသော စတီးလုပ်ငန်း ကဏ္ဍ၊ အစိုးရနှင့် စတီးလုပ်ငန်းကြီးများက ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ကို ထိခိုက်လာစေမည်ကို စိုးရိမ်နေကြသူများအကြား သဘောထားကွဲလွဲတင်းမာမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
အချို့သော ‌လေ့လာသုံးသပ်သူများကတော့ မဟာဗျူဟာကျသော ကဏ္ဍတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ကြောင်း ထောက်ပြကြသည်။
Eurofer ကတော့ ဥရောပသမဂ္ဂသို့ တရုတ်နိုင်ငံက တင်ပို့နိုင်မှုများပြားလွန်းနေ‌ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နမူနာတစ်ခုပင် ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြသည်။
ဗြိတိသျှအစိုးရနှင့် Jingye ကတော့ အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာမှတ်ချက် ပြုခြင်းမရှိသေးပေ။
“ယူကေအစိုးရဘက်ကနေ အထောက်အပံ့တွေ မပါဖို့ လိုတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် ဒါဟာ ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ နိုင်ငံတော် အထောက်အပံ့ပေးရေးစည်းမျဥ်းတွေနဲ့ မကိုက်ညီပါဘူး” ဟု Eurofer ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ Axel Eggert က ပြောသည်။
ကမ္ဘာ့စတီးလုပ်ငန်း၏ ထက်ဝက်ခန့်ကို ထုတ်လုပ်နေသော တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာ့စတီး‌လ်ဈေးကွက်တွင် ပမာဏအများအပြား ထုတ်လုပ်နေသည့် အဓိက နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း Eggert က ပြောသည်။
ကမ္ဘာ့စတီးလုပ်ငန်း၏ ပိုလွန်သော ထုတ်လုပ်နိုင်မှုမှာ တစ်နှစ်လျှင် တန်ချိန် ၄၅၀ သန်းရှိပြီး ဥရောပဈေးကွက် အရွယ်အစား၏ သုံးဆမျှရှိသည်။ ထိုပမာဏအနက် သုံးပုံနှစ်ပုံနှင့် အထက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံက ထုတ်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Eurofer က ပြောသည်။
စတီးလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွင်းမှ အဖွဲ့အစည်းများကတော့ ဥရောပ၏ စတီးလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် ဈေးသက်သာသော သွင်းကုန်များမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ပိုမိုတင်းကြပ်သော စည်းမျဥ်းများ ချမှတ်ရန် တွန်းအားပေးနေသည်။
SourceBarbara Lewis (REUTERS)
Previous articleSterling Steady as Traders See Conservative Majority After Election
Next articleStocks Climb, Investors Seek Enlightenment from Trump On Trade